AU chief urges Africa to help Zimbabwe overcome crisis - Thaindian News
AU chief urges Africa to help Zimbabwe overcome crisis
June 30th, 2008 - 4:55 pm ICT by IANS Tweet
Sharm el-Sheikh (Egypt), June 30 (Xinhua) African Union (AU) Commission chief Jean Ping Monday called on African countries to help Zimbabwe overcome its political crisis in the wake of the controversial presidential election. “Africa must fully shoulder its responsibilities and do everything in its power to help the Zimbabwean parties to work together to help them overcome their country’s problems,” he said at the opening session of the 11th AU summit in the Red Sea resort.
Zimbabwean President Robert Mugabe arrived Monday at the summit where he would be under pressure to negotiate with the opposition after winning a one-candidate election condemned by monitors as unfair and violent.
During the summit, Jean Ping also hailed the efforts by southern African countries in trying to help solve Zimbabwe’s problems.
Under the theme “Meeting the Millennium Development Goals on Water and Sanitation”, the two-day summit is attended by heads of state and government of 53 members.
Tags: africa, egypt, el sheikh, heads of state and government, millennium development goals, monitors, opposition, political crisis, president robert mugabe, presidential election, red sea resort, robert mugabe, southern african countries, summit, water and sanitation, xinhua, zimbabwe, zimbabwean president robert mugabe